सावधान ! यस्ता मानिसहरुलाई भुलेर पनि आफ्नो साथी नबनाउनुस्, हुन सक्छ जीवनकै ठूलो भुल - Taja Report
Homeराशिफलसावधान ! यस्ता मानिसहरुलाई भुलेर पनि आफ्नो साथी नबनाउनुस्, हुन सक्छ जीवनकै ठूलो भुल
July 9, 2018 राशिफल Comments Off on सावधान ! यस्ता मानिसहरुलाई भुलेर पनि आफ्नो साथी नबनाउनुस्, हुन सक्छ जीवनकै ठूलो भुल
मानिस सामाजिक प्राणी हो । आमाको गर्भबाट भूइँमा झरेसँगै ऊ विभिन्न भूमिकामा परिभाषित हुन्छ। कसैको छोरा-छोरी, भाइ-बहिनी, नाति-नातिनी आदि । जब ठूलो हुँदै जान्छ, अनि रगतसँग कुनै साइनो नजोडिएकाहरु पनि उसको जीवनमा जोडिन आइपुग्छन्, साथीको रुपमा ।
१. कुरा-कुरामा अपमानित गर्ने
साथी-साथीमा हाँसी-मजाक त चलिरहन्छ । यस्तोमा कहिलेकाहीँ अनजानमा बोलिने कुरा र गरिने व्यवहारले चित्त दुख्न सक्छ, यो त सामान्य नै हो । तर, कसैले जिस्किएको बहानामा तपाइँलाई बारम्बार अपमानित गर्न खोज्छ भने त्यस्तो व्यक्तिसँगको संगत आजै छाडिदिनुस् । साथीको सम्बन्ध सम्मानमा हुन्छ, अपमानमा होइन।
२. सधैँ आफ्नै कुरा लाद्ने
साथी त एकअर्काको सफलतामा खुसी हुनुपर्छ । यदि कोही त्यस्तो व्यक्ति जो अरुको सफलतामा जल्छ भने त्यो कसैको संगत लायक हुँदैन । यस्ता व्यक्तिले तपाइँलाई पनि कहिल्यै सफल हुन दिँदैनन् । त्यसलै यिनीहरुको संगत आजैबाट छाडिदिनुस् । अनि कतै तपाइँमा पनि यस्तो कुनै गलत स्वभाव त छैन ? यदि त्यस्तो हो भने, तपाइँ स्वयमलाई पनि यो फाइदाजनक नहुनसक्छ । समयमै सोच्नुहोला ।
यो दुई मिनेटको नियमले गरिदिनेछ तपाईंको जीवन परिवर्तन !